हात खुट्टामा माकुराको जालो जस्तो नीलो नशा खुम्चिएको छ ? घरमै यसरी गर्नुहोस् उपचार « गोर्खाली खबर डटकम
२०७८ असोज ७ गते बिहिवार प्रकाशित
काठमाडौँ । तपाईंले प्राय: देख्नु भएको होला कि माकुराको जालो जस्तै आकारको नीलो नसाहरु हात वा खुट्टाहरूमा छालाको माथि देखिन्छ। कहिलेकाँहि यो खुट्टा वा खुट्टामा भन्दा माथि फिलामा बढी देखिन्छ, वा कहिले कुर्कुचोको छेउमा, यो नीलो नसा खुट्टा वा साप्रामा धेरै ठूलो हुन्छन् ।
के तपाईंले कहिल्यै याद गर्नु भएको छ कि तपाईंको परिवारको सदस्यहरूको पाखुरामा नीलो नशा ठूलो परिमाणमा उत्पन्न हुन्छ। साथै हात पनि सुनिन्छ होला । के तपाईंले कहिलेकाँही मानिसहरूमा नीलो नशा गुचुमुचु भएको देख्नुभएको छ ? विशेष गरी छातीको माथिल्लो भाग र घाँटीको तल्लो भागमा यो देखिने गर्दछ।
यी नसाहरू किन देखा पर्छन् त ? यी फैलाउने नशाहरू शरीरको माथिल्लो सतहमा नशाहहरूको सञ्जाल हुन्, जुन सामान्य अवस्थामा शरीरको बाहिरी छालामा फैलिँदैन र शरीरको भित्र रहेको मोटो शिराको प्रणालीमा जोडिएको हुन्छ।
नशा देखिनुको कारण: यदि तपाईको हातको माथिल्लो भाग अथवा हातमा नीलो नशा अचानक देखिन्छ र समान हुन्छ भने यसको कारण यो हो कि हातहरुबाट अशुद्ध रगत संकलन गर्ने शिरा, रगतका शिराहरु स्थायी रुपमा शिरा वा घाँटी वा काँधमा जममा भएका छन्।
नसा फैलिदै गएको देखिनु: यसलाई सामान्य नठान्नुहोला यदि निलो रंगको नसाहरू तपाईंको फिलामा माकुराको जालहरू जस्तो झल्किरहेको देखा पर्दै छ भने यसलाई भास्कुलर वा कार्डियो भास्कुलर सर्जनलाई देखाउनुहोस् र उनीहरूको सल्लाह लिनुहोस्।
यस्तो फैलिएको निलो शिराका लागि दुई कारणहरू छन्ः एउटा कारण क्रोनिक शिरापरक शिशु अवस्था हो, जसमा शिरा भित्रका ढोकालाई कमजोर बनाउँछ। सामान्य शिरामा स्थित नराम्रो अशुद्ध रगत एक दिशामा मात्रै तलमाथि गर्ने अनुमति दिन्छ। जसले खुट्टाको फिलामा अशुद्ध रगत ज्यादा जम्मा हुन नपाओस् ।
नियमित व्यायाम को अभावले खुट्टाको हातको गोलीगाँठो कमजोर हुन्छ जसले मानिस आफ्नो काम सजीलै गर्न असमर्थ हुन्छन् । केही समयका लागि शिरामा रगत जम्मा हुने हुँदा छालाको संरचनामा परिवर्तन आंशिक रूपमा नष्ट हुन्छ, जसको कारण अशुद्ध रगत माथि तल आउँछ। बल्जङ् शिरा मुनि देखा पर्दछ ।
एप्पल साइडर भिनेगर: यस बाहेक, एप्पल साइडर भिनेगर धेरै लाभदायक हुन सक्छ । एप्पल साइडर भिनेगरसँग हल्का मालिश गर्नुपर्दछ र दिनमा दुई चम्चा दुई दिन लिनु पर्छ र पानीमा खानुपर्छ।
मूलाको रस: मूलाको रसमा पीठो भिजाएर रोटी बनाउनुहोस् र रोटी बाक्लो बनाउनुहोस्। त्यसपछि त्यो रोटी र मूलाको रस लिनुहोस् र त्यस रोटीलाई मसिनो पिठो जस्तै बनाउनुहोस् र यसलाई भेरिकोज भानामा लगाउनुहोस् र रातभर कपडामा बाँध्नुहोस् र बिहान त्यस बाधेँको कपडालार्य निकाल्नुहोस्।
अब देखि झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जाँदैन’ग्राहकका माग तत्कालै पूरा हुन्छ ,ढुक्क हुनुहोस ; कुलमान घिसिङ